जडीबुटी आफैंमा पैसाको खेती
जडीबुटीसँग मानव जातिको साइनो सम्बन्ध धेरै लामो छ । प्राचीन पूर्वीय धार्मिक ग्रन्थहरुमा जडीबुटीको महत्वको साथ चर्चा छ । प्राचीन तथा आधुनिक लोकप्रिय काव्यहरुमा पनि जडीबुटीले मूल्यवान जीवन बचाउन योगदान पु-याएको सरल र सरस भाषामा स्थान पाएका छन् । नेपालीहरुको एव हिन्दुहरुको प्रिय काव्य रामायणमा मुर्छित लक्ष्मणलाई बचाउन रामको आदेशमा सन्जिवनी बुटी खोज्न गएका हनुमानले नचिनेर बुटी भएको पहाडै बोकेर ल्याएको कथा बढो रोचक किसिमले लेखिएको छ । सञ्जीवनी बुटीले मुर्छामा परेका बेहोस लक्ष्मणलाई पुनः होसमा ल्याएर रावणसँग युद्धमा फर्काएको थियो । त्यस्तै महाकवि देवकोटाले लेखेको नेपाली पाठक माझमा लोकप्रिय भएको मुनामदनमा पनि जडीबुटीको राम्रो चर्चा छ । हैजाका सिकिस्त बिरामी मदनलाई भोटेले जडीबुटी पिलाएर स्वस्थ र बलियो बनाएको सुमधुर झ्याउरे भाकामा धेरै नेपालीले गाएका छन । त्यसरी नै नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका जडीबुटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण साधन मानेर यसलाई निर्यात गरेर नगद खैचन निर्देशन दिएका थिए । आयुर्वेद त पूर्वीय औषधि विज्ञान र जडीबुटी आदिको स्रोत ग्रन्थ नै भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालमा आयुर्वेद तथा जडीबुटीमा आधारित धेरै औषधालयहरु छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटीमा आधारित औषधि सम्बन्धिका धेरै परम्परागत विज्ञहरु पाइन्छन् । कतिपय त आधुनिक उपचार विधि वा औषधिभन्दा पनि प्रभावकारी सिद्ध पनि भएका छन् । यसको राम्रो पक्ष भनेको नकारात्मक असर नहुनु पनि हो । कतिपयको भने प्रभावकारी वैज्ञानिक किसिमले अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । हुनसक्छ अझै पनि कतिपय धेरै उपयोगी तथा औषधीय गुण भएका वनस्पति तथा जडीबुटीमा मानव जाति तथा आधुनिक विज्ञान नपुगेको होस् । आधुनिक हनुमानहरुले पनि सुनेका तर नचिनेका धेरै जडीबुटीहरु खोजिरहेका हुन कुनै जंगलमा या जडीबुटीका पहाडमा । नेपालमा बहुउपयोगी जडीबुटी उत्पादनको प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ । नेपालमा प्रकृतिले पनि धेरै जडीबुटी दिएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन र व्यवसायीककरण पनि हुन सकेको छैन । उचित किसिमले सङ्कलनको ज्ञानको अभावले गर्दा लिनुपर्ने लाभ पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । सरकारी बेवास्ता र नागरिकहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा पनि तस्करहरुले गैरकानुनी बाटोबाट नेपालका अमूल्य जडीबुटी कौडीको मूल्यमा बाहिर लगिरहेका छन । कतिपय स्थानीयवासीहरुले मूल्यवान जडीबुटी तथा वनस्पतिबारे जानकारी नभएर पनि तिनलाई काट्ने फाड्ने मास्ने काम पनि भएको पाइएको छ । अब नेपालमा जडीबुटीलाई बढीभन्दा बढी व्यावसायिक उत्पादनमा लानु समयको आवश्यकता भएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान पनि त्यतिकै जरुरी भएको छ । यो नेपालीको आय आर्जनको राम्रो व्यवसाय हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा थप छलफल गरौं चर्चा चलाऔं ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले जडीबुटीको अर्थ महत्व बुजेर नै यसलाई निर्यात गरेर नगद खैचन निर्देशन दिएका हुन् । तर उनले निर्देशन दिएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि जडीबुटीको अध्यायन, अनुसन्धान, विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणमा कसैको गम्भीर ध्यान गएको पाइएको छैन । न त पृथ्वीनारायणको मुकुट ओड्ने उनका अनेक कालका कुनै उत्तराधिकारीको नै ध्यान गएको थियो न त उनको मुकुट तोड्ने कुनै गणतन्त्रवादीको नै । हाम्रा नेपाली नेता र जनता पनि अनौठा छन् । आफ्ना नेताले त्यति धेरै वर्ष अगाडि जडीबुटीबाट नेपालले धेरै कमाउन सक्छ भनेकोलाई बुझ पचाउँछन् । तर छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मा गरेको सम्बोधनमा नेपालले जडीबुटीबाट धेरै कमाउन सक्छ भन्दा के के नयाँ र महत्वपूर्ण कुरा भने भनेर थपडी लाउने र प्रशंसाको गीत गाउने गर्दछन् । हाम्रा अखबारहरु पनि त्यसै गर्छन् । के हामीलाई जडीबुटीको महत्वबारे सिकाउन भारतका मोदी वा रामदेव नै आउनुपर्ने हो र ? निश्चय नै होइन । धेरै अगाडि नै जडीबुटी उत्पादनमा व्यावसायिक नेपाल भइसक्नुपर्ने थियो । किनभने नेपाल प्राकृतिक तथा व्यावसायिक दुवै किसिमले जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपाल परापूर्व कालदेखि नै सदाबहार जडीबुटीको मुलुक थियो छ र भइरहनुपर्छ । नेपालमा धेरै मूल्यवान तथा बहुउपयोगी जडीबुटीहरु पाइन्छन् जो व्यावसायिक रुपले पनि खेती गर्न सकिने खालका छन् ।
नेपालका सबै भूगोल क्षेत्र हिमाल, पहाड, तराईका पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण जता पनि जडीबुटीका व्यावसायिक खेती गर्न सकिने सम्भावना जहिले पनि छ । नेपाललाई प्रकृतिले दिएको सुन्दर पक्षको उपहार भनेकै यही हो । तर हामीले प्राकृतिको यस्तो सुन्दर उपहारको कहिल्यै प्रभावकारी किसिमले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । व्यवसायीकरुपले खेती गर्न सकिने प्राकृतिक रुपले पनि जताततै पाइने नेपालमा धेरै जडीबुटीहरुको चर्चा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता जडीबुटीहरुको लामै सूची तयार गर्न पनि सकिन्छ । जसको व्यावसायिक उत्पादन गरेर नेपालीले काम पाउन्, दाम पाऊन् र नाम पनि कमाऊन् । व्यावसायिकरुपले खेती गर्न सकिने त्यस्ता केही जडीबुटीको सामान्य जानकारी लिन कोसिस गरौं । लामो खोकी लागिरह्यो भने पिपला खान सल्लाह दिन्छन् गाउँघरतिर । पिपलाको जरा, डाँठ, पात, फल सबै औषधिमा प्रयोग हुन्छ भन्छन् जानिफकारहरु । आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिअनुसार पिपला एक बहुगुणकारी महत्वपूर्ण जडीबुटी मानिन्छ ।
यसलाई दम खोकी, सर्प बिच्छीको टोकाइ, रतन्धो, आउँ, जण्डिस, ज्वरो, निद्रा नलाग्ने, दाँतको दुखाइ तथा पेटको, पिसाबको, मिर्गौलाको समस्यामा पनि यो उपयोगी हुने विभिन्न लेखकहरुले चर्चा गरेको पाइन्छ । यो बहुउपयोगी औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिबाट तेल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । चर्चित च्यवनप्रासमा पनि पिपलाको मिश्रण अनिवार्य मानिन्छ । समुद्री सतहभन्दा एक हजार मिटरको उचाइसम्म खेती गर्न सकिने पिपला तराई, भित्री मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन, निजी आवादीहरुमा समेत यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञ र निकायहरुले लेख्दै र भन्दै आएका छन् । यो बहुवर्षीय लहरो प्रजाति हो । एकपल्ट रोपेपछि छ वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने हुनाले व्यावसायिक खेतीको लागि यो सजिलो हुनसक्छ । यसको उत्पादनको बिक्रीको लागि बजारको कुनै समस्या छैन । नेपाली बजारमा नै यो प्रतिकिलो दुई सय जतिमा बिक्री हुन्छ । सर्पगन्धा अर्को महत्वपूर्ण औषधिको लागि अति उपयोग वनस्पति हो । यो पनि बहुवर्षे सदाबहार बिरुवा भएकोले यसको व्यावसायिक उत्पादन सजिलो र फाइदाकारी हुनसक्छ । यसलाई नेपालीमा चाँदमरुवा, पागलबुटी अनेक नामले चिन्छन् । यो आयुर्वेदिक औषधिमा शताब्दीऔंदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ भने आधुनिक औषधिमा पनि दशकौंदेखि भइरहेको छ । यसको देश विदेशका सबै खाले औषधि उत्पादनको लागि राम्रो माग छ । यो उच्च रक्तचापको लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ ।
मानसिक रोगको उपचारमा समेत यो उपयोगी मानिने हुनाले यसको बजार जताततै छ । चिराइतो अर्को औषधियुक्त महत्वपूर्ण वनस्पति हो । यो समुद्री सतहभन्दा बाह्र सयभन्दा माथि तीन हजार मिटरसम्म उम्रन्छ । यो ज्वरो मलेरियालगायत धेरै रोग बिरामी निको पार्न सक्ने औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । आयुर्वेदमा त यसलाई क्यान्सर रोगसँग लड्ने औषधिमा यसको महत्वपूर्ण अंश हुन्छ । यसको औषधि बनाउन धेरैमा उपयोगी हुनाले देश विदेशमा यसको बजार जताततै छ । त्यसैले यसको व्यावसायिक उत्पादनले जहिल्यै बजार पाइरहने सम्भावना छ । नेपालमा पाइने सुगन्धवाला अर्को महत्वपूर्ण औषधीय गुणयुक्त वनस्पति हो । यो अगरबत्ती बनाउनसमेत सदुपयोग गर्न सकिने हो । यसको बजारमा समस्या छैन यो पनि व्यावसायिक खेतीको लागि उपयोगी वनस्पति सावित भएको छ । यसको पनि व्यावसायिक उत्पादन गरेमा उत्पादकले राम्रै नगद प्राप्त गर्न सक्छन् । १५ सय मिटरदेखि यो तीन हजार मिटरको उचाइमा पाइने र उत्पादन गर्न सकिने वनस्पति हो । टिमुर पनि त्यस्तै उपयोगी औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । यसलाई औषधी, अचार र मसलामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टिमुरलाई किरा नियन्त्रण गर्न पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यो पहाडी भेगमा बाह्र सयदेखि २२ सय मिटरको उचाइमा राम्रो फल्छ । यसको देश विदेश सबैतिर राम्रो माग छ । यसबाट तेल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको व्यवसायमा लाग्नेहरुले पनि राम्रो नगद तान्न र सजिलोसँग जीवन धान्न सक्छन् । माथि उल्लेख गरिएका जडीबुटीका केही प्रतिनिधि नामहरु हुन् । यस्ता उपयोगी जडीबुटी वनस्पतिहरुको धेरै लामो सूची बनाउन सकिन्छ । यस्ता जडीबुटीहरुको जति लामो सूची हुन्छ त्यति नै नगद प्राप्त गर्ने आधार बलियो हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सामूहिक, व्यक्तिगत किसिमले व्यावसायिक किसिमले जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनमा लागे आम्दानीको भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ । अझ प्रशोधन गरेको मात्र जडीबुटी निर्यात गर्ने नीति नेपालले लिने हो भने नेपालले अरु धेर कमाउन सक्छ । र जडीबुटी निर्यात गर्नु र नगत खैंचनु भन्ने राष्ट्रनिर्माताको निर्देशन विचारले पनि व्यवहारबाटै सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)
हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
वैदिक ग्रन्थ, जो वैदिक धर्म वा हिन्दू धर्मको आधारस्तम्भ मानिन्छ, शान्तिको निम्ति विश्वकै पहिलो दस्तावेज हो...
समृद्धिका लागि इन्जिनियरहरुको कठिन यात्रा
वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर अगाडि बढेको छ तर समृद्धि कसरी आउँछ, कसले बनाइदिन्छ, समय...
आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?
प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका लागि कम्प्युटर शिक्षा
कांग्रेसमा के होलान् जिल्लाका सुझाव